Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina Serieux tsara ankehitriny amin'ny A220-300
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • teknolojia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Breeze Airways, dia zotram-piaramanidina amerikana manana foibe any Cottonwood Heights, Utah.
I David Neeleman no nanangana ny zotram-piaramanidina, izay niara-nanorina an'i Morris Air, WestJet, JetBlue, ary Azul Linhas Aereas teo aloha.
Breeze Airways dia nanambara ny vaovao A220-300 raha nanamafy fa nahatratra fifanarahana fividianana niaraka tamin'ny Airbus ho an'ny fiaramanidina 20 fanampiny.
Ity kaomandy 20 tsy voamarina teo aloha ity dia mitondra ny boky totalin'i Breeze ho 80 A220-300, ny voalohany dia ho entina amin'ny Q4 2021.
Ny asan'ny loko vaovao an'ny fiaramanidina dia vita tao amin'ny tranoben'ny Airbus any Mobile, Alabama, izay hanatitra A220 isam-bolana eo ho eo any Breeze ao anatin'ny enin-taona sy tapany manaraka.
Breeze Airways, seranam-piaramanidina rezionaly amerikana dia nilaza momba ilay orinasa: “Ekipa mpankafy fiaramanidina, tia mandray vahiny ary teknolojia izahay izay mino fa ny manidina no tombontsoa sy tombontsoa lehibe indrindra manerantany. Ary mino izahay fa tokony ho traikefa azo idirana sy tena tsara ho an'ny rehetra izany. ”
“Niara-namorona isika Breeze Airways ™ - haitao vaovao mampitambatra ny seranam-piaramanidina am-pitiavana. Breeze dia manome serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny zotra tsy voatanisa manerana an'i Etazonia amin'ny sarany mora vidy.
“Miaraka amin'ny famandrihana tsy misy fangarony, tsy misy sarany fanovana na fanafoanana ary fiasa manokana natokana ho an'ny sidina natolotra tamin'ny alàlan'ny fampiharana manintona sy tsotra, manamora ny fividianana sy ny fanidinana mora ny Breeze. Tongasoa eto amin'ny sidina Breeze, sidina Serie Nice ™. ”
Nikasa ny hanomboka sidina miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2022 ny zotram-piaramanidina.
Tanànan'ny Breeze Air
Ny fahombiazan'ny A220 ambony dia hanohana ny tanjon'ny orinasam-piaramanidina vaovao hanome traikefa amin'ny dia be, miaraka amin'ny saran-dàlana ambany sy malefaka avo. Ny tsio-drivotra dia antenaina hanome serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny zotra tsy an'asa manerana an'i Etazonia amin'ny sarany mora vidy.
Nanomboka ny fiasan'ny fiaramanidina ny tsio-drivotra tamin'ny Mey 2021. Ity A220 voalohany ity no fiaramanidina vaovao voalohany izay tantanan'ny kaompaniam-pitaterana.
Ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsenan'ny seza 100-150 ary mampivondrona ny aerodynamika manara-penitra, fitaovana mandroso ary ny maotera turbofan an'ny Patt1500G an'ny Pratt & Whitney. Mahazo tombony amin'ny teknolojia farany, ny A220 no fiaramanidina mangina, madio ary tsara indrindra amin'ny tontolo iainana ao amin'ny sokajy misy azy.
Ahitana dian-tongotra mihena 50% ary hatramin'ny 25% ny fandoroana solika ambany isaky ny seza raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha, ary koa ny manodidina ny 50% avo lenta ny emission NOx noho ny fenitra indostrialy, ny A220 dia fiaramanidina lehibe ho an'ny asa tanàn-dehibe.
170 A220 mahery no natolotra tamin'ny mpandraharaha folo tany Azia, Amerika Avaratra, Eoropa ary Afrika, manaporofo ny fahaizan'ny mpampiasa Airbus farany.
Ny fanafody ho an'ny fiakaran'ny tosidrà Losartan dia averina averina